Masinina fikarohana sidina mora vidy - NY sidinao amin'ny PRICE TSARA
Sidina mora vidy
Tadiavo ny sidina tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra Azo atao izany noho ny pejy fikarohana sy fampitahana sidina izay misy amin'ny Internet ary mpandeha maro no mampiasa tahiry sy vidiny ambany kokoa.
Masinina fikarohana sidina mora vidy
Amin'ny fampiasana ireto motera fikarohana sidina mora vidy manaraka ireto dia afaka mahita sy mividy ny tapakilan'ny fiaramanidinao amin'ny vidiny tsara indrindra ianao ary miaraka amin'ny antoka rehetra. Izy io no vahaolana tsotra sy haingana indrindra ary ilay anoloran-kevitra avy any amin'ny Absolut Viajes.
Saingy tsy io safidy io ihany, misy tranonkala maro hafa ao amin'ny Internet. Inona no tsara indrindra? Eny, satria ny mpitsangatsangana rehetra dia manana ny pejy tiany, eto no hanolorantsika ireo izay tena tianay:
Mazava ho azy fa: ny masoivohon'ny fizahan-tany an-tserasera malaza dia manolotra anao ny sidina rehetra amin'ny vidiny tsara indrindra tsindrio eto.
eDreams: Iray amin'ireo masoivoho mpandehandeha lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, raha te hahita sidina mora vidy ianao tsindrio eto.
Skyscanner Iray amin'ireo motera fikarohana malaza indrindra sy malaza eran'izao tontolo izao izy io. Ampitahao amin'ireo safidy an'arivony ary tadiavo ny sidina tadiavinao amin'ny vidiny mora indrindra tsindrio eto.
Sambory izy: Afaka mahita sy mampitaha sidina an'arivony ianao noho ity motera fikarohana ity. Midira sy mamandrika amin'ny vidiny tsara indrindra tsindrio eto
Liligo: Ao Liligo dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilainao izahay hamandrihana sidina mora vidy miaraka amin'ny antoka rehetra. kitiho eto
Lastimate manolotra sidina maro be. Midira eto ary ampitahao ny vidiny rehetra hahitana ny sidina tadiavinao.
Iray amin'ireo fomba fitaterana azo antoka sy haingana indrindra ny fiaramanidina. Misaotra azy fa afaka manomboka mandamina ny dia manaraka isika. Ny tanjona dia afaka miovaova arak'izay avelan'ny saintsika. Mazava ho azy, voalohany indrindra, tsara kokoa ny manomboka amin'ny toerana tena tsy maintsy anaovantsika azy: mijery sidina mora.
Raha izy irery, amin'ny fialantsasatra dia hamela teti-bola be isika, tsy voatery hiorina amin'ny sidina foana izany. Androany dia misy tombony sy fihenam-bidy marobe, izay ahafahanao mahazo sidina mora vidy, saika tsy mieritreritra.
1 Masinina fikarohana sidina mora vidy
2 Mandeha fiaramanidina
3 Tombontsoa amin'ny famandrihana sidina an-tserasera
4 Mitadiava sidina mora mankany amin'ny toerana itiavanao azy
5 Ahoana ny fiasan'ny motera fikarohana ny sidina mora vidy
6 Toeran-kaleha lehibe hitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina
6.1 Sidina mora mankany London
6.2 Sidina mora mankany Madrid
6.3 Sidina mora mankany Barcelona
6.4 Sidina mora mankany Paris
6.5 Fomba hanidina amin'ny fiaramanidina mankany Roma
Tombontsoa amin'ny famandrihana sidina an-tserasera
Iray amin'ireo hevitra tsara indrindra raha ny momba azy manofa sidina an-tserasera, dia ny fanaovana azy tsara, tsy misy fanampian'ny olona. Hanokana fotoana be dia be isika amin'izany, saingy satria mila mampitaha sy mamaky ny fampahalalana rehetra omen'ny internet antsika isika.
Mikaroha amin'ny antsipiriany: Voalohany indrindra, mila mitazona milina fikarohana tsara isika, toy ilay atolotray anao. Tsy ilaina zavatra sarotra loatra, fa ny fahafantarana fa ho hitantsika izay tadiavintsika. Zavatra tsotra sy haingana izay manamora ny asantsika. ny milina fikarohana tsara hanana boaty hamenoana azy hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny toerana alehany. Toy izany koa, ny fiaingana sy ny fiverenana dia ilaina mba hahomby amin'ny diantsika. Afaka segondra segondra dia ho azontsika ampiasaina ny sidina mora rehetra mbola misy seza.
tolotra: Tsy isalasalana fa ny tolotra ihany koa no filaharan'ny andro. Ka, tsy mampaninona ny mijery tranokala isan-karazany afaka mampitaha ny vidiny tsara indrindra. Hamarino tsara fa ao amin'izy rehetra, ny fiampangana farany dia voafaritra tsara, izay ho hita taratra amin'ny vidiny. Aza entin'ny tolotra tsara, raha tsy efa novakianao tsara ny pirinty tsara.
Fiadanan-tsaina sy fiononana: Mazava ho azy fa hataontsika an-trano izany rehetra izany. Ny faran'ny herinandro iray, rehefa manam-potoana bebe kokoa isika, dia mety ho fotoana mety. Amin'izany dia ho afaka hitety amin'ny fomba milamina kokoa isika, mampitaha ny karazana sidina rehetra ary koa ny tolotra atolotra antsika. Azo antoka fa amin'ny tsindry roa dia hanana izay rehetra ilainao ianao amin'ny dia tsy hay hadinoina.
Mitadiava sidina mora mankany amin'ny toerana itiavanao azy
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, voalohany indrindra dia ny fieritreretana ny toerana itiavantsika azy ireo. Ankehitriny rehefa hitantsika an-tsary izany, inona no azontsika atao hahitantsika sidina mora vidy?
manovaova: Tsy misy fisalasalana fa ny fahafaha-mitantana ny fandaharam-potoana dia iray amin'ireo fitaovam-piadianay tsara indrindra hahatratrarantsika ny tsara fifanarahana momba ny sidina. Ataovy ao an-tsaina fa hiakatra ny vidiny rehefa misafidy toerana malaza sy mpizahatany izahay. Toy izany koa, fantatsika rehetra ny vanim-potoana faratampony sy ny fiantraikany eo amin'ny vidiny ihany koa. Miaraka amin'ny moteram-pikarohanay, afaka hahita toeran-kaleha izay tsy noeritreretinao akory ianao fa amin'ny vidiny tena lafo. Fomba entina mitsoaka sy mahita toerana tsy manam-paharoa.
Vidio aloha na tara ny sidina?: Misy fisalasalana lehibe foana eto amin'ity fanontaniana ity. Tsy mora ny mamaly. Hiankina amin'ny anton-javatra maro izany, saingy afaka milaza isika fa na ny famandrihana mialoha na amin'ny tara aza dia mety hitarika fiakarana amin'ny vidin'ny tapakila. Inona no azontsika atao amin'ireo tranga ireo ?. Eny, amin'ny ankapobeny, voalaza fa farafaharatsiny, manorata roa volana mialoha. Etsy ankilany, farafaharatsiny, telo na efatra herinandro eo ho eo alohan'ny hanombohanao. Araka ny antontan'isa momba ny maso ivoho, voafaritra fa ny fotoana tokony hividianana sidina mora vidy dia manodidina ny 55 andro mialoha. Aorian'ity indray mitoraka ity dia afaka miakatra indray ny salan'isa, koa miambena hatrany.
kiranyNa dia mety hanelingelina aza izy io indraindray, io ihany koa no lakilen'ny fitadiavana sidina mora vidy. Tsy isalasalana fa misy toerana itadiavana azy ireo ary, na dia mamindra antsika amin'ny toerana hafa aza izy ireo, ny zava-dehibe dia ny vokatr'izany vidiny farany. Fomba lavorary very any amin'io faritra io izay tsy fantatsika ary hanome fotoana antsika hahita alohan'ny hiainganay indray.
Ahoana ny fiasan'ny motera fikarohana ny sidina mora vidy
Tsy misy isalasalana, ny motera fikarohana ny sidina dia iray amin'ireo fitaovana mora ampiasaina indrindra. Angamba satria ireo boaty ilaina fotsiny ireo no ho fohy kokoa amin'ny fikarohana. Voalohany, hatoronao ny niandohany. Azonao atao ny misafidy mivantana ny seranam-piaramanidina akaiky anao ary koa ny anaran'ny tanànanao. Toy izany koa, tsy maintsy hanao zavatra mitovy amin'ny toerana itodiana ianao. Ity toerana izay hankafizanao ny fialan-tsasatra mendrika anao ity.
Raha vantany vao fenoina ity dia tsy maintsy mandeha mijery ny andro sidina isika. Hiseho ny kalandrie, ka tsy maintsy mifidy ny andro manokana ianao. Ho fanampin'izay, afaka misafidy ianao hoe a lalana iray na fitsangatsanganana. Tsotra, marina? Eny, tsindrio fotsiny ny bokotra, "Karohy" ary dia izay. Amin'ity indray mitoraka ity dia hiseho amin'ny antsipiriany ny safidin'ny safidy rehetra. Tranonkala samihafa manome anao ny sidina tsara indrindra amin'ny vidiny lafo. Azonao atao ny mampitaha sy mifidy izay mety aminao indrindra.
Toeran-kaleha lehibe hitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina
Iray amin'ireo Londres no tanjona voalohany. Isan-taona dia misy mpizahatany maro izay mahalala ny renivohitr'i Angletera. Azonao atao ny mahita sidina mora mankany London isaky ny tianao. Betsaka ny orinasa manolotra azy ireo ary izany no antony, avy amin'ny motera fikarohana dia azonao atao ny mampitaha ireo seranam-piaramanidina rehetra, ary koa ny fandaharam-potoana sy ny tahan'ny. Anisan'ireo malaza indrindra ny Vueling, Ryanair na Air Europa. Ankoatr'izay, manana fiainganana amin'ny seranam-piaramanidina lehibe ianao sy amin'ny ora maromaro mandritra ny andro. Tsy manana fialan-tsiny mety tsy handeha ianao!
Sidina mora mankany Madrid
Toy izany koa, fitsidihana maro ny renivohitr'i Espana. Matetika dia mora kokoa ny sidina mankany Madrid hamela izany amin'ny maraina. Ankoatr'izay, ny andro faran'ny herinandro dia tena ilaina ihany koa mba hahitanao ny fihenan'ny vidiny farany. Afaka adiny iray mahery dia ho tonga amin'ny toerana halehanao ianao.
Any Barcelona dia hihaona amin'ny seranam-piara-manidina El Prat isika. Io no faharoa lehibe indrindra any Espana, ka tsy hita isa ny sidina sy mpandeha mitsidika azy isan'andro. Izy io dia manana faritra fialan-tsasatra telo ary koa faritra fitobiana. Manana orinasam-pirenena sy iraisam-pirenena marobe, koa ho mora kokoa mahita sidina mora foana.
Para manidina any ParisManana orinasa samihafa toa an'i Iberia, Air Europa, British Airway na Vueling isika, ankoatry ny hafa. Hiankina amin'ny faritra halehany sy hahatongavany hatrany izany. Paris dia manana seranam-piaramanidina telo. Charles de Gaulle, Orly ary Beauvais. Izy rehetra dia mifandray tsara amin'ny afovoany.
Fomba hanidina amin'ny fiaramanidina mankany Roma
Raha tianao izany manidina any RomaTokony ho fantatrao fa misy seranam-piaramanidina iraisampirenena roa. Izany dia satria mitombo isan-taona ny fifamoivoizan'ny mpitsidika anao. Ny sasany amin'ireo orinasa mora vidy tonga dia ny Vueling, Ryanair na Easyjet. Ao amin'izy ireo dia afaka mahita foana ianao tolotra latsaky ny 30 euroraha mbola valizy tanana ihany no entinao. Barcelona, ​​Ibiza, Madrid na Seville no sasany amin'ireo hevi-dehibe tokony hananana sidina mivantana mankany Roma.
Araka ny hitanao dia misy toerana maro hitsidihana sy vidiny mora vidy maro azontsika ankafizina. Mila misafidy andro fotsiny ianao ary manomboka mankafy ny fialan-tsasatra mendrika anao.